Famandrihana tsy misy tariby, Charger Wireless, Mouse Mat - Sheerfond
Fiampangana namboarina tsy misy taratraManam-pahaizana momba ny famokarana
Dongguan Sheerfond New Material Co., Ltd dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra vaovao. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny akora graphene sy ny vokatra fampiharana, ny birao sy ny vokatra an-trano ary ny fanomezana. Ny tanjontsika dia ny "teknolojia ho an'ny fiainana". Ny tombony ananantsika: ny fahaizan'ny fampandrosoana ny vokatra matihanina: avy amin'ny fivoarana ara-materialy, ny endrika endrika, ny famolavolana mekanika, ny famolavolana bobongolo, ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra tokana, ahodino ho lasa vokatra tsara ny hevitrao ary tanteraho ny nofinao.
avadiho ho tonga vokatra tsara ny hevitrao ary tanteraho ny nofinao.
Volom-baravarana fanafanana Graphene
Volom-bava fanafanana io. Ny kojakoja momba ny Heating dia ravina graphene vita amin'ny sheerfond. Ny graphe ...
Saron-tava masaka Graphene
Sarontava masom-borona manafana graphene ity. Ity vokatra ity dia natao indrindra hanamaivanana ny havizanan'ny maso sy hampiroborobo ...
Fametahana famandrihana tsy misy tariby
Ity dia vokatra vita amin'ny hoditra !, fitoerana finday sy mpihazona finday, miaraka amina charger famahanana tsy misy tariby, ianao ...
Kitapom-batsy herinaratra finday tsy misy vidiny
Ireto ny masontsivana momba ny vokatra: Model No. QB001 Output 5V2A fampidirana 5V 2A fahafaha-manao ...
Kalandrie famerana tsy misy tariby
Ireto ny masontsivana momba ny vokatra: Model No. TL02 LED Colour RGB fampidirana 9V1.5A / 5V2A ...
Product parameter Model No. X-2 Output 5V 2A fampidirana AC90-240V LED Color White Printin ...
A5 tsy misy tariby famandrihana finday notepad
Model No. A5-1 Output 5V2A fampidirana 5V 2A fahafaha-4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh / 10000mAh ...
Mpihazona penina tsy misy tariby
Mipetraka amin'ny birao milamina, eo amin'ny latabatra misy anao, misy mpihazona penina mahafinaritra, izay afaka mitahiry ny ...
Ity vokatra ity dia kely amin'ny habe, multi-functional, misy kojakoja elektronika, miaraka amin'ny finday p ...
Ity vokatra ity dia vokatra patanty, miaraka amina fiasan-drakitra sy fiasan-taratra tsy misy tariby amin'ny multi-f ...
Magnetic mouse pad-grey
Amin'ny biraonao milamina, pad mouse iray tsara tarehy, miaraka amin'izay dia mpihazona penina sy mobile pho ...
Miaraka amin'ny asa aman-draharaham-barotra be atao sy ny fampandrosoana ny vokatra elektronika dia mila mitondra ...
Afaka miaro ny faritra fonenanay izahay, ary mamela anao hivarotra ny vokatray amin'ity faritra ity ihany
fampandrosoana ny vokatra
Lazao anay ny hevitrao sy ny zavatra ilainao. Mampiasa ny fahaizanay amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny bobongolo, ny elektronika ary ny famokarana izahay mba hampiroboroboana ny hevitrao ho vokatra tsara ary hanaterana vokatra be dia be ho anao ara-potoana.
Fanaingoana ny vokatra
Amin'ireo vokatra azonay hamokarana betsaka, arakaraka ny filanao, amboary ny atiny ilainao amin'ny vokatra sy fonosana ary mahazoa haingana ny filanao ilaina.
Mba hisorohana ny fifaninanana ratsy eo amin'ny tsena dia miara-miasa izahay hiaro ny tsena, ny fizarazarana ny asa ary ny fiaraha-miasa, manao asa tsara amin'ny fampandrosoana sy famokarana vokatra izahay, manao asa tsara ianao amin'ny varotra sy fampiroboroboana ny vokatra.
sheerfond dia mandray anjara amin'ny foara fanomezana 2021
Sary 1. sary 1 Mijery ambany ny foara fanomezana 2021 Amin'ny maha mpanamboatra sy ozinina fanomezana sy vokatra famoronana antsika, dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana fanomezana natao tamin'ny 25 hatramin'ny 28, 2021 izahay. Tamin'ny fampirantiana dia nifankahita tamina mpanjifa taloha sy vaovao izahay. Tena ...
Inona no mitranga amin'ny famandrihana wireless Wireless iPhone12 MagSafe
Inona no mitranga amin'ny famandrihana Wireless Wireless Wireless MagSafe Nanomboka tamin'ny iPhone 8 tamin'ny 2017, dia nampidirin'ny Apple ny lahasa fiasa tsy misy tariby amin'ny maodely iPhone rehetra, izay mitovy amin'ny fomba famahana finday hafa amin'ny finday hafa, ary manomboka mamaly izy rehefa apetraka. amin'ny tariby ...
Manaraka ny fitsipiky ny mpanjifa aloha izahay amin'ny dingana rehetra
Omeo anay ny mailakao dia ho havaozina isan'andro ianao amin'ireo tranga farany indrindra, amin'ny daty!
Afaka manome anao santionany sy fampahalalana bebe kokoa izahay
Adiresy: Tanànan'i Dongguan
Telefaona: +86 13602550350